Ogadentoday Press » Daawo- Madaxweynhii horre Kililka oo si risma ah loo xidhay
Daawo- Madaxweynhii horre Kililka oo si risma ah loo xidhay
Footage, Ethiopian TV
OTP- Dowlada Itoobiya ayaa sheegay in Madaxweynaha Kililka horre Cabdi Maxamud Cumar oo si risma ah loo xidhay kaddib markii saaka lagu war galiyay in Qarreenka ugu sarreeya Itoobiya amar ka soo baxay lagu xidhay.
Eeedayna Cabdi ayaa sababa ugu weyn looga dhigay isku dhaca Qoomiyadda Oromada Iyo Soomaalida iyo Kaniisado lagu gubay Magaalada Jigjigga kaddib maalinkii ciidamada Militariga soo galeen sidoo kalle arrimo ka dhan ah xuquuqda Aadanaha. Inta baddan dadka waxay si weyn u aaminsan yihiin in Cabdi aan loo xidhin arrim Soomaali balse tahay qaddiyad ka weyn oo ah arrimaha Oromada Iyo Diimeed sida Telleefishinka Itoobiya sheegay.
Telleefishinka ayaa soo bandhigay hub iskugu jira qoryo iyo bastoolado ay sheegeen in xaafadiisa laga helay, waxaana midan loo badinayaa inay tahay kiis ku buuxis aysan ahayn mid dhab ah macquula la noqon waysay Dadka kaddib markii mudooyin horre sidan kalle siyaasiyiin danbiyo loo haysta lagu eedeyay inay hub haysteen sidoo kalle suxufiyiin, Tusaale Wariyaasha Swedish ayaa Cabdi laftiisa horrey ugu eedeyay inay hub wateen kuwaas ahaa been abuur laga samaynayay Wariyaasha sida ay sheegeen.
Dareen culus ayay kicisay arrintan iyadoo dad baddan social media ka leeyihiin maxaa kaligii loo soo dirayaa kaddib haddii Qoomoiyadda Oromada waxay dileen dad baddan Soomaali ah maa la soo xidho Madaxweynaha Oromiya laakiin waxay midaas ilaawin in Madaxweynaha aan la xiri karrin dhanka Sharciga waa midka Oromada maadaamo hadda xasaanaad uu haysto, mida labaad oo ah in Qoomiyadda Oromada xukunka haystaa marnaba aqbalaynin in Madaxweynaha la xidho arrun Soomaali!
Arrintan ayaa si dhab ah u ah in Sharcigu uu qabto oo kali ah kuwa awooda aan lahayn, waa xaqiiq in Cabdi gobaad ka dhan ah arrimaha Soomaalida sameeyay balse midaas sidaa la sheegay waxaa la yiri waa mid u taalla Soomaalida hadase waa mid ka duwan.
Inta Xukunka hayay Cabdi wuxuu la dagaalamay Jabhada ONLF oo kumanaan ka dilay sidoo kalle shacab baddan ka xidhay, waxaana ku xaraysanaa Jeel Ogaden kumanaan shacab ah dhamaan arrimahaas oo dhan waxaa kalla weyn Itoobiya 3 Kaniisad lagu gubay Jigjiga waana mida TV Qaranka Itoobiya ku soo cel-celiyay. Aqoonyahanka ayaa qaarkood ku tilmaamay arrintan mid ah qabjabin iyo niyad jabin ku aadan Soomaalida balse RW Itoobiya oo dhawaan la kulmay Sooomaalida ayaa sheegay innuusan wax colaad ah Soomaalida u qabin. Taageerayaasha Cabdi ayaa maanta u ahayd maalin madow waxaana hubaal ah innuu leeyahay taageerayaal ku aamisan isagaa siyaasad ahaan.
Daawo Warbaxinta Laga diyaariyay
Daawo- Madaxweynaha KM Jigjiga Lagu soo Dhaweeyay
Daawo- Madaxweyne Mustafe oo Magacaabay Masuuliyin Iyo Mudaaharaadyo Jigjiga